Ph7BBQ & Seafood
Show All Most Popular Cutlery Special Menu of Ph7Special Giant Seafood Dishes Fish (Main Dishes) (ငါး) Squid (Main Dishes) (ကင်းမွန်)(ကငျးမှနျ) Oyster (Main Dishes) (ကမာ) Clam (Main Dishes) (ဂုံး )( ဂုံး ) Seafood (Main Dishes) (ပင်လယ်စာ) (ပငျလယျစာ) Snacks BBQ Lobster (ကျောက်ပုစွန်)(ကြောကျပုစှနျ) Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါး)(ပွညျကွီးငါး) Octopus (ရေဘ၀ဲ)(ရဘေဝဲ) Crab (ဂဏန်း) (ဂဏနျး) Soft-Shell Crab (ဂဏန်းပျော့)(ဂဏနျးပြော့) Chicken (ကြက်) (ကွကျ) Pork (၀က်)(ဝကျ) Eel (ငါးရှဉ့်) (ငါးရှဉျ့) Cheese Fried Vegetables Fried Salad Soup
Special Menu of Ph 7
Giant Seafood Dishes
Fish (Main Dishes) (ငါး)
Squid (Main Dishes) (ကင်းမွန်)(ကငျးမှနျ)
Oyster (Main Dishes) (ကမာ)
Clam (Main Dishes) (ဂုံး )( ဂုံး )
Seafood (Main Dishes) (ပင်လယ်စာ) (ပငျလယျစာ)
Crab (ဂဏန်း) (ဂဏနျး)
Soft-Shell Crab (ဂဏန်းပျော့)(ဂဏနျးပြော့)
Chicken (ကြက်) (ကွကျ)
Eel (ငါးရှဉ့်) (ငါးရှဉျ့)
No. 3B, Hlaing Butar Yone Street, Yangon, MM Hlaing
Craw fish(2pcs), Tiger(2pcs), Fresh Water Prawn(1pc), Octopus(1pc), Grilled Ribs(2pc), Crab(1pc), Broccoli(1pc), Quails(1pc), Sweet Corn(1pc), Chicken Sausage(2pcs)
Crab Masala (ဂဏန်းမဆလာ)(ဂဏနျးမဆလာ)
Grilled Pork Neck (၀က်ဂုတ်သားကင်)(ဝကျဂုတျသားကငျ)
Seafood Pasta Cheese Bite
Pasta, Lobster, Fresh Water Prawn, Cuttlefish, Oyster, Raw Clam, Clam, Bee Clam, Crab, Sweet Corn, Potato, Broccoli, Enoki Mushroom, Cheeses, Present Man Hto Burn
Grilled Pork Ribs (၀က်နံရိုးကင်)(ဝကျနံရိုးကငျ)
Ph7Seafood Platter
Thai Style Grilled Pork Spicy (၀က်ကင်ခရုဆီအစပ်ချက်) (ဝကျကငျခရုဆီအစပျခကျြ)
Grilled Lobster (ကျောက်ပုဇွန်ကင်) (ကြောကျပုဇှနျကငျ)
Grilled Enoki Mushroom (အပ်မှိုကင်)(အပျမှိုကငျ)
Tom Yum Soup (Seafood) (တုန်ယမ်းဟင်းချို)(ပင်လယ်စာ)(တုနျယမျးဟငျးခြို)(ပငျလယျစာ)
Ph7Signature
Pink Grilled Prawn (4pcs), Fresh Raw Oyster(3pcs)or Oyster Cheese(2pcs), Fried Flat Fish(2pcs), Spicy Crab (1pc), Scallop(5pcs)
All R Fried
Craw Fish, Fried Fish Flat, Fried Prawn, Sweet Corn, French Fried, Sunkit
Lobster, Fresh Water Prawn, White Prawn, Octopus, Crab, Cuttlefish, Squid, Raw Clam, Clam, Blood Clam, Bee Clam, Potato, Carrot, Cucumber
16' Tiger Campfire
PH7 Crispy Spicy Clam (Ph-7ဂုံးခြောက်စပ်)(Ph-7ဂုံးခွောကျစပျ)
Streamed Razor Clam Bean Vermicelli (ဂုံးယောင်းမပဲကြာဇံပေါင်း)(ဂုံးယောငျးမပဲကွာဇံပေါငျး)
Grilled Fresh Water Prawn (3 Pcs) (ရေချိုပုစွန်ထုပ်ကြီးကင်) (ရခြေိုပုစှနျထုပျကွီးကငျ)
New Zealand Clam Jit Jet (New Zealand ဂုံး Jit Jet)(New Zealand ဂုံး Jit Jet)
Spicy & Sour Pork Back Soup (၀က်ကျောရိုးချဉ်စပ်ဟင်းရည်)(ဝကျကြောရိုးခဉျြစပျဟငျးရညျ)
Kone Htan (ကု(န်)ထန်)(ကု(နျ)ထနျ)
Choice of Prawn or Seafood!
Fresh Water Prawn, Lobster, Crab, Cuttlefish, Raw Clam, Clam, Bee Clam, Egg, Chicken Sausage, Cheese Tofu, Thaiwan Mustard
PH-7 Signature Steamed Fish (Ph-7 ငါးပေါင်း)(Ph-7 ငါးပေါငျး)
Deep Fried Fish with Spicy & Sour Sauce (ငါးချဉ်စပ်)(ငါးခဉျြစပျ)
Sweet & Sour Fish (ငါးချိုချဉ်)(ငါးခြိုခဉျြ)
Deep Fried Fish with Tamarined Sauce (ငါးမန်းကျည်းသီးဆော့(စ်))(ငါးမနျးကညျြးသီးဆော့(ဈ))
Deep Fried Fish with Tekiyaki Sauce (ငါးTeriyakiဆော့(စ်)) (ငါးTeriyakiဆော့(ဈ))
Deep Fried Fish with Black Pepper Sauce (ငါးငရုတ်ကောင်း)(ငါးငရုတျကောငျး)
Steamed Fish with Lemongrass (ငါးပေါင်းစပါးလင်ရနံ့)(ငါးပေါငျးစပါးလငျရနံ့)
Thai Style Spicy Fish (ငါးအနှစ်အစပ်ချက်)(ငါးအနှဈအစပျခကျြ)
Salted Egg Squid (ကင်းမွန်စားဘဲဥအနှစ်ချက်) (ကငျးမှနျစားဘဲဥအနှဈခကျြ)
Thai Style Spicy Squid (ကင်းမွန်အနှစ်အစပ်ချက်)(ကငျးမှနျအနှဈအစပျခကျြ)
Spicy & Sour Squid (ကင်းမွန်ချဉ်စပ်)(ကငျးမှနျခဉျြစပျ)
Streamed Squid with Lemon Sauce (ကင်းမွန်သံပုရာပေါင်း) (ကငျးမှနျသံပုရာပေါငျး)
Thai Style Spicy Oyster (ကမာအနှစ်အစပ်ချက်)(ကမာအနှဈအစပျခကျြ)
Spicy & Sour Oyster Curry (ကမာချဉ်စပ်)(ကမာခဉျြစပျ)
Oyster Basil Leaves Curry (ကမာပင်စိမ်း) (ကမာပငျစိမျး)
Clam Basil Leaves Curry (ဂုံးပင်စိမ်း) (ဂုံးပငျစိမျး)
Clam Masala (ဂုံးမဆလာ)(ဂုံးမဆလာ)
Spicy & Sour Clam (ဂုံးချဉ်စပ်) (ဂုံးခဉျြစပျ)
Thai Style Spicy Clam (ဂုံးအနှစ်အစပ်ချက်)(ဂုံးအနှဈအစပျခကျြ)
Streamed Clam (ဂုံးပေါင်း) (ဂုံးပေါငျး)
Crispy Spicy Clam (ဂုံးခြောက်စပ်) (ဂုံးခွောကျစပျ)
Rakhine Style Clam Salad (ဂုံးယောက်မရခိုင်သုပ်) (ဂုံးယောကျမရခိုငျသုပျ)
Thai Style Spicy Seafood (ပင်လယ်စာအနှစ်အစပ်ချက်)(ပငျလယျစာအနှဈအစပျခကျြ)
Spicy & Sour Seafood (ပင်လယ်စာချဉ်စပ်)(ပငျလယျစာခဉျြစပျ)
Farmer Seafood Curry (ပင်လယ်စာလယ်သမားဟင်း)(ပငျလယျစာလယျသမားဟငျး)
Cashew Nut (သီဟိုဠ်စေ့ကြော်) (သီဟိုဠျစကွေ့ျော)
French Fries (အာလူးကြော်) (အာလူးကွျော)
Mackerel Fish Cracker (ငါးမုန့်ကြော်) (ငါးမုနျ့ကွျော)
American Onion Ring (ကြက်သွန်ကွင်းကြော်) (ကွကျသှနျကှငျးကွျော)
Grilled Fish Kabab (ငါးခဲပတ်ကင်) (ငါးခဲပတျကငျ)
Grilled Eel (ငါးရှဉ့်ကင်)(ငါးရှဉျ့ကငျ)
Grilled Fresh Water Prawn (ရေချိုပုစွန်ကင်)(ရခြေိုပုစှနျကငျ)
Grilled Tiger Prawn (Tiger ပုစွန်ကင်)(Tiger ပုစှနျကငျ)
Pork Flat Mushroom (၀က်သားပြားမှို) (ဝကျသားပွားမှို)
Chicken Flat Mushroom (ကြက်သားပြားမှို)(ကွကျသားပွားမှို)
Grilled Octopus (ရေဘ၀ဲကင်)(ရဘေဝဲကငျ)
Grilled Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါးကင်)(ပွညျကွီးငါးကငျ)
Grilled Sweet Corn (ပြောင်းဖူးကင်)(ပွောငျးဖူးကငျ)
Grilled Garlic (ကြက်သွန်ဖြူကင်) (ကွကျသှနျဖွူကငျ)
Grilled Ginkgo (နှစ်တရာသီးကင်)(နှဈတရာသီးကငျ)
Streamed Enoki Mushroom (အပ်မှိုပေါင်း)(အပျမှိုပေါငျး)
Seafood Mixer (ပင်လယ်စာအစုံ)(ပငျလယျစာအစုံ)
Lobster Red Spicy Curry (ကျောက်ပုဇွန်အနှစ်အစပ်ချက်)(ကြောကျပုဇှနျအနှဈအစပျခကျြ)
Lobster with Lemon Sauce (ကျောက်ပုဇွန်သံပုရာပေါင်း)(ကြောကျပုဇှနျသံပုရာပေါငျး)
Lobster with Garlic Sauce (ကျောက်ပုဇွန်ဂျင်းမိတ်) (ကြောကျပုဇှနျဂငျြးမိတျ)
Sweet and Sour Lobster (ကျောက်ပုစွန်ချိုချဉ်)(ကြောကျပုစှနျခြိုခဉျြ)
Smoked Fire Lobster (ကျောက်ပုစွန်မီးတောက်)(ကြောကျပုစှနျမီးတောကျ)
Thai Style Lobster Masala (ကျောက်ပုစွန်မဆလာ)(ကြောကျပုစှနျမဆလာ)
Lobster Kong pao (ကျောက်ပုစွန်ကုန်းဘောင်)(ကြောကျပုစှနျကုနျးဘောငျ)
Spicy & Sour Lobster (ကျောက်ပုစွန်ချဉ်စပ်) (ကြောကျပုစှနျခဉျြစပျ)
Lobster with Black Pepper (ကျောက်ပုစွန်ငရုတ်ကောင်း) (ကြောကျပုစှနျငရုတျကောငျး)
Streamed Lobster (ကျောက်ပုစွန်ပေါင်း)(ကြောကျပုစှနျပေါငျး)
Spicy & Sour Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါးချဉ်စပ်) (ပွညျကွီးငါးခဉျြစပျ)
Thai Style Spicy Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါးအနှစ်အစပ်ချက်)(ပွညျကွီးငါးအနှဈအစပျခကျြ)
Cuttlefish in Lemon Sauce (ပြည်ကြီးငါးသံပုရာပေါင်း)(ပွညျကွီးငါးသံပုရာပေါငျး)
Spicy & Sour Octopus (ရေဘ၀ဲချဉ်စပ်) (ရဘေဝဲခဉျြစပျ)
Thai Style Spicy Octopus (ရေဘ၀ဲအနှစ်အစပ်ချက်)(ရဘေဝဲအနှဈအစပျခကျြ)
Streamed Octopus with Lemon Sauce (ရေဘ၀ဲသံပုရာပေါင်း) (ရဘေဝဲသံပုရာပေါငျး)
Streamed Octopus (ရေဘ၀ဲပေါင်း)(ရဘေဝဲပေါငျး)
Thai Style Spicy Crab (ဂဏန်းအနှစ်အစပ်ချက်) (ဂဏနျးအနှဈအစပျခကျြ)
Spicy & Sour Crab (ဂဏန်းချဉ်စပ်) (ဂဏနျးခဉျြစပျ)
Crab Black Pepper Sauce (ဂဏန်းငရုတ်ကောင်း)(ဂဏနျးငရုတျကောငျး)
Smoked Fire Crab (ဂဏန်းမီးတောက်)(ဂဏနျးမီးတောကျ)
Streamed Crab (ဂဏန်းပေါင်း)(ဂဏနျးပေါငျး)
Thai Style Spicy Soft-Shell Crab (ဂဏန်းပျော့အနှစ်အစပ်ချက်)(ဂဏနျးပြော့အနှဈအစပျခကျြ)
Spicy & Sour Soft-Shell Crab (ဂဏန်းပျော့ချဉ်စပ်)(ဂဏနျးပြော့ခဉျြစပျ)
Thai Style Soft-Shell Crab Masala (ဂဏန်းပျော့မဆလာ) (ဂဏနျးပြော့မဆလာ)
Crispy Soft-Shell Crab (ဂဏန်းပျော့ကြော်)(ဂဏနျးပြော့ကွျော)
Chicken Basil Leaves Curry (ကြက်ပင်စိမ်း)(ကွကျပငျစိမျး)
Sweet & Sour Chicken (ကြက်ချိုချဉ်)(ကွကျခြိုခဉျြ)
Chicken Kong pao (ကြက်ကုန်းဘောင်)(ကွကျကုနျးဘောငျ)
Spicy & Sour Chicken (ကြက်ချဉ်စပ်)(ကွကျခဉျြစပျ)
Chicken with Salted Egg (ကြက်ခပေါင်းဆားဘဲဥ)(ကွကျခပေါငျးဆားဘဲဥ)
Spicy & Sour Pork (၀က်ချဉ်စပ်)(ဝကျခဉျြစပျ)
Sweet & Sour Pork (၀က်ချိုချဉ်)(ဝကျခြိုခဉျြ)
Pork Basil Leaves Curry (၀က်ပင်စိမ်း)(ဝကျပငျစိမျး)
Pork with Salted Egg (၀က်ခပေါင်းဆားဘဲဥ)(ဝကျခပေါငျးဆားဘဲဥ)
Pork Kong pao (၀က်ကုန်းဘောင်) (ဝကျကုနျးဘောငျ)
Crispy Spicy Eel (ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ်)(ငါးရှဉျ့ခွောကျစပျ)
Spicy & Sour Eel (ငါးရှဉ့်ချဉ်စပ်)(ငါးရှဉျ့ခဉျြစပျ)
Eel Basil Leaves Curry (ငါးရှဉ့်ပင်စိမ်း)(ငါးရှဉျ့ပငျစိမျး)
Eel Village Curry (ငါးရှဉ့်တောချက်)(ငါးရှဉျ့တောခကျြ)
Fresh Water Prawn Cheese (ရေချိုပုဇွန်Cheese)(ရခြေိုပုဇှနျCheese)
Lobster Cheese (ကျောက်ပုစွန်Cheese) (ကြောကျပုစှနျCheese)
Oyster Cheese (ကမာCheese)(ကမာCheese)
Blue Mussel Cheese (ဂုံးစိမ်းCheese)(ဂုံးစိမျးCheese)
Razor Calm Cheese (ဂုံးယောင်းမCheese)(ဂုံးယောငျးမCheese)
Scallop Cheese (1 pc)
Fried Sweet Corn (ပြောင်းဖူးကြော်)(ပွောငျးဖူးကွျော)
Fried Sweet Corn & Enoki Mushroom (အပ်မှိုပြောင်းဖူးကြော်)(အပျမှိုပွောငျးဖူးကွျော)
Fried Morning Glory (ကန်စွန်းရွက်ကြော်) (ကနျစှနျးရှကျကွျော)
Fried Enoki Mushroom with Morning Glory (မှိုကန်စွန်း) (မှိုကနျစှနျး)
Fried Kailan with Oyster Sauce (ကိုက်လန်ခရုဆီ)(ကိုကျလနျခရုဆီ)
Fried Kailan with Crispy Pork Belly (ကိုက်လန်ဝက်ခေါက်) (ကိုကျလနျဝကျခေါကျ)
Fried Lady Finger (ရုံးပတီသီးကြော်)(ရုံးပတီသီးကွျော)
Fried Asparagus with Oyster Sauce (ကညွန့်ခရုဆီ) (ကညှနျ့ခရုဆီ)
Fried Asparagus & Ginkgo Nut (ကညွန့်နှစ်တရာကြော်)(ကညှနျ့နှဈတရာကွျော)
Fried Asparagus with Crispy Pork Belly (ကညွန့်ဝက်ခေါက်ကြော်) (ကညှနျ့ဝကျခေါကျကွျော)
Fried Mixed Vegetable (သီးရွက်စုံကြော်)(သီးရှကျစုံကွျော)
Fried Broccoli (ပန်းစိမ်းကြော်) (ပနျးစိမျးကွျော)
Fried Taiwan Cabbage (ထိုင်ဝမ်မုန့်ညှင်းကြော်) (ထိုငျဝမျမုနျ့ညှငျးကွျော)
Fried Chinese Cabbage (မုန့်ညှင်းဖြူကြော်) (မုနျ့ညှငျးဖွူကွျော)
Omelette with Lettuce (ဆလပ်ရွက်ကြက်ဥကြော်)(ဆလပျရှကျကွကျဥကွျော)
Fried Fish Finger (ငါးအသားချောင်းကြော်)(ငါးအသားခြောငျးကွျော)
Fried Rice (ထမင်းကြော်)(ထမငျးကွျော)
Streamed Rice (ထမင်းပေါင်း) (ထမငျးပေါငျး)
Fried Noodle (ခေါက်ဆွဲကြော်)(ခေါကျဆှဲကွျော)
Fried Vermicelli (ကြာဇံကြော်)(ကွာဇံကွျော)
Thai Style Fried Rice (ပသျှူးထမင်းကြော်) (ပသြှူးထမငျးကွျော)
Fried Squid with Gralic (ကင်းမွန်ကြက်သွန်ဖြူကြော်) (ကငျးမှနျကွကျသှနျဖွူကွျော)
Squid Tempura (ကင်းမွန်တန်ပူရာကြော်)(ကငျးမှနျတနျပူရာကွျော)
Fried Pork Ribs (၀က်နံရိုးကြော်)(ဝကျနံရိုးကွျော)
Stir Fried Fresh Pork with Sesame (၀က်နေတလှန်းကြော်) (ဝကျနတေလှနျးကွျော)
Crispy Pork Belly (၀က်ခေါက်ကြော်)(ဝကျခေါကျကွျော)
Crispy & Spicy Fried Pork (၀က်ခြောက်စပ်)(ဝကျခွောကျစပျ)
Fried Pork Small Intestine (၀က်အူချိုကြော်)(ဝကျအူခြိုကွျော)
Crispy & Spicy Fried Chicken (ကြက်ခြောက်စပ်)(ကွကျခွောကျစပျ)
Fried Chicken (ကြက်တုံးကြော်) (ကွကျတုံးကွျော)
Fried Chicken Wing (ကြက်တောင်ပံကြော်)(ကွကျတောငျပံကွျော)
Deep Fried Fish Salad (ငါးကြွပ်ကြော်သုပ်)(ငါးကွှပျကွျောသုပျ)
Thai Style Squid Salad (ကင်းမွန်သုပ်)(ကငျးမှနျသုပျ)
Jelly Noodle Salad with Squid (ကင်းမွန်ပဲကြာဇံသုပ်) (ကငျးမှနျပဲကွာဇံသုပျ)
Coral Mushroom Salad (ကျောက်ပွင့်သုပ်) (ကြောကျပှငျ့သုပျ)
Seafood Coral Mushroom Salad (Seafood ကျောက်ပွင့်သုပ်)(Seafood ကြောကျပှငျ့သုပျ)
Thai Style Papaya Salad (သင်္ဘောသီးထောင်း)(သင်ျဘောသီးထောငျး)
Thai Style Seafood Papaya Salad (Seafood သင်္ဘောသီးထောင်း)(Seafood သင်ျဘောသီးထောငျး)
Thai Style Sweet Corn Salad (ပြောင်းဖူးထောင်း)(ပွောငျးဖူးထောငျး)
Thai Style Mixed Fruit Salad (သီးစုံထောင်း)(သီးစုံထောငျး)
Thai Style Squid Salad (ကင်းမွန်ထောင်း)(ကငျးမှနျထောငျး)
Thai Style Papaya Salad with Crab (ဂဏန်းသင်္ဘောသီးထောင်း) (ဂဏနျးသင်ျဘောသီးထောငျး)
Thai Style Crab Salad (ဂဏန်းထောင်း) (ဂဏနျးထောငျး)
Chicken Feets Pounded (ကြက်ခြေထောက်ထောင်း)(ကွကျခွထေောကျထောငျး)
Chicken Sole Pounded (ကြက်ခြေဖ၀ါးထောင်း)(ကွကျခွဖေဝါးထောငျး)
Thai Style Pork Neck Salad (၀က်ဂုတ်သားကင်သုပ်)(ဝကျဂုတျသားကငျသုပျ)
Crispy Pork Belly Salad (၀က်ခေါက်ကြော်သုပ်)(ဝကျခေါကျကွျောသုပျ)
Chicken Ball & Wood Ear Fungus Salad (ကြက်သားလုံးကြွက်နားရွက်သုပ်)(ကွကျသားလုံးကွှကျနားရှကျသုပျ)
Thai Style Octopus Salad (ရေဘ၀ဲသုပ်)(ရဘေဝဲသုပျ)
Thai Style Cuttlefish Salad (ပြည်ကြီးငါးသုပ်)(ပွညျကွီးငါးသုပျ)
Jelly Noodle Salad with Cuttlefish (ပြည်ကြီးငါးပဲကြာဇံသုပ်)(ပွညျကွီးငါးပဲကွာဇံသုပျ)
Mixed Seafood Salad (ပင်လယ်စာအစုံသုပ်) (ပငျလယျစာအစုံသုပျ)
Jelly Noodle Salad with Seafood (ပင်လယ်စာပဲကြာဇံသုပ်) (ပငျလယျစာပဲကွာဇံသုပျ)
Spicy Seafood Soup (ပင်လယ်စာချဉ်စပ်ဟင်းချို) (ပငျလယျစာခဉျြစပျဟငျးခြို)
Spicy Fish Head Soup (ငါးခေါင်းချဉ်စပ်ဟင်းချို)(ငါးခေါငျးခဉျြစပျဟငျးခြို)
Tom Yum Soup (တုန်ယမ်းဟင်းချို)(တုနျယမျးဟငျးခြို)
Fish Ball & Egg Soup (ငုံးဥငါးဖယ်လုံးဟင်းချို) (ငုံးဥငါးဖယျလုံးဟငျးခြို)
Chicken Feets Spicy Soup (ကြက်ခြေထောက်ချဉ်စပ်ဟင်းချို) (ကွကျခွထေောကျခဉျြစပျဟငျးခြို)